Malunga nathi-Fuzhou Landtop Co, Ltd.
umenzi oqeqeshiweyo kunye nomthengisi weDynamo, Alternator, Generator, Diesel Generator, Electric Electric, njl.
Ngeminyaka yophuhliso, I-LANDTOP Uphuhle waba yinkampani enkulu, yanamhlanje, ebanzi neyehlabathi. Isebe lethu lokuthengisa likwisiXeko saseFuzhou (Fuzhou Landtop Co, Ltd. & FUJIAN TOPS POWER CO., LTD.) Isixeko eselunxweme lolwandle, esonwabela inethiwekhi yokuhamba. Sikwanomzi-mveliso wethu kwisiXeko seFu'an (Fu'an Landtop Power Co, Ltd.) Iziko lethu lehlabathi likhona eHongkong. Iqela lethu lixhotywe ngenani elikhulu lemigca yokuhlangana ngokuthe ngqo, iinkqubo zovavanyo ezihlanganisiweyo kunye nezixhobo zokuphuma. SineeNjineli zeengcali, amalungu e-QC anobuchule, abathengisi abanamava kunye neenkonzo eziphambili zentengiso emva kwentengiso. Ixabiso langoku lokuthengisela ukuthengisa lonyaka lingaphezulu kwezigidi ezili-15 zeedola zaseMelika.
Sisoloko sisenza iinzame ezinkulu zokufezekisa ukudityaniswa kwemveliso kunye nentengiso. Siyakwazi ukufezekisa iimfuno zabathengi bethu, ukubabonelela ngeemveliso ezisemgangathweni. Iimveliso zethu, ngenxa yexabiso elifanelekileyo, ukusebenza ngokuphezulu kunye nokusebenza kokugcina amandla, zinconywa kakhulu ngabathengi kumazwe angaphezu kwama-80 kunye nemimandla, njengeYurophu, Melika, uMzantsi mpuma weAsia, uMbindi Mpuma, Afrika, njl.
Inkqubo ye-R & D yobuchwephesha, itekhnoloji esemgangathweni, iqela elinobuchule beQC kunye neqela lolawulo elikugqwesileyo linokukunika isiqinisekiso esiqinisekileyo. Iqela lethu ngokuqhubekayo lenza imizamo enzima yokuvelisa izinto ezintsha ukuze bakhonze abathengi bethu. Siqinisekisa ukuba ukusebenzisana kwethu kuya kusizisela isibonelelo sokuphumelela.